လေနုအေး: ကောက်ရိုးမီးအလှူနှင့်မလုံလောက်ပါ
Posted by တန်ခူး at 10:37 AM
ဟုတ်ပါတယ် တန်ခူးရေ.. တတ်နိုင်သလောက် လစဉ်လှူနိုင်အောင် ကြိုးစားတယ်။ လှူလည်း လှူတယ်။
လစဉ်အလှူရှင်တွေ များများရှိပါစေ၊ သူတပါးအလှူကိုလည်း နှောင့်ယှက်တဲ့သူများရန်မှ ကင်းပါစေလို့ ထပ်ပြီး ဆုတောင်းပါတယ်။
We need to provide our country more and more.
We need to do our country as we can.
Thanks for that precious news.
Every Myanmar will think how can we save our Myanmar.
Yes. We do need to look for the long term.
Paranoid ဖြစ်တဲ့ စိတ်တွေကိုလဲ ကုစားကြရမယ်ထင်တယ်နော်.. မ..
ကယ်ဆယ်ရေးက ရေတိုမှာ ရနိုင်လောက် ပေမယ့် လူ ၂သန်းခွဲ အတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ဟာ တကယ် တော့ လူသန်း၅၀ ရဲ့ ထမင်း နပ်ပေါင်း များစွာ အတွက် ပြန်လည် ထူထောင်ရေးလို့လဲ ပြောလို့ ရနေပါတယ်။ မြန်မာ့ စပါးကျီ ဒေသက မျိုးဆက်သစ် ကလေးတွေရဲ့ ရုပ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာနဲ့ အနာဂတ် တွေ အားလုံး အတွက် ပူပန်မှု ဆိုတဲ့ ရင်ထဲက ဒဏ်ရာ ဒဏ်ချက် တွေကို အတတ် နိုင်ဆုံး ၀ိုင်းဝန်း ကူညီ ကုသ ပေးဖို့က ညီမတို့ မြန်မာ နိုင်ငံသား အားလုံးရဲ့ အမျိုးသားရေး တာဝန် တစ်ရပ် ပါပဲနော်...
ကြားရတာ ဝမ်းသာပါတယ်နုရေ...ဆုတောင်းလေးလဲ ပြည့်ပါစေ...
ကိုယ်တိုင်မသွားနိုင်တော့ တတ်နိုင်သလောက်ကူညီကြည့်တာပါ ထနောင်းရေ...ကျေးဇူးပါ
တယောက်အားဖြင့်မရတော့ ဝိုင်းဝန်းကူညီကြတာပေါ့ မြတ်နိုးရေ
အမျိုးသားရေး တာဝန် တစ်ရပ်...သိပ်မှန်တာပဲလှိုင်ရေ...ပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေ စတင်နေပြီကြားရလို့ ဝမ်းသာပါတယ်...